Somaliland oo su'aal gelisay mustaqbalka wadahadallada Soomaaliya - BBC News Somali
Xigashada Sawirka, SOMALILAND TV
Axmedyaasiin Sheekh Cali Ayaanle, gudoomiye ku xigeenka Golaha Wakiillada Somaliland
Golaha wakiillada Somaliland ayaa si weyn u soo dhaweeyey booqashada uu madaxweyne Biixi uu ku tagay dalka Guinea, wuxuuna goluhu shaki ka muujiyey inuu sii socon karo wadahadalladi Somalia iyo Somaliland u dhaxeeyey.
Wuxuuna guddoomiya ku xigeenku sheegay "Jamhuuriyadda Somaliland haddii taariikh ahaan iyo waaqic ahaana loo eego cidina ma dafirsana iney ahayd qaran madaxbannaan oo 26-kii June madaxbannaanidiisa ka qaatay mustacmaraddii Ingiriiska."
"Iyaga oo xor ah oo caqligooda qaba oo walaal jeceyl Soomaali jeceyl ooy ugu biireen ooy ula midoobeen israacii labada gobol wakhtigi la oran jiray."
"Si taa la mid ah marki ay waayeen wixi ay ku riyoonayeen waayeen oo ay ku hungoobeen iyada oo dhibaatooyin iyo taariikh xoog leh oo badani ayaa dib loola soo noqday si madax bannaan, taa waa middi taariikhda, Somaliland waa xaqiiqa jirta oo dunida la macaamisha, oo dowladaha waaweyn oo caalamka la macaamilaan oo UN-ta la macaamisho."
"Balse waxaa ayaan darra ah ummad Soomaaliyeed oo dal jeceyl iyo wada dhalasho iyo walaalnimo aan dowladdayadii dhammeed ugu hibeynay warki balada naga raacdayna aan nidhi aan kala eed la'aanno iney maanta ay jiritaanka iyo wixi Somaliland wanaag u soo kordho ay cadaawad ka muujiyaan waan ka xunnahay tan koowaabaad waxaana taa nooga horreysay tii DP world marki ay maalgashatay dekedda Barbara" ayuu yiri guddoomiya ku xigeenka.
"Dowladda Somaliland waa dowlad Soomaaliyeed oo Soomaali u soo kordheysa madax bannaanideeda, jiritaankeeda, qaranimadeeda iyo dowladnimadeeda oo meel maraa waa qayb Soomaali ka mid ah oo meel martay, marka caqliga fayoow ee Soomaaliga muwaaddinka ah ma diidayo in qayb Soomaali ka mid ah ama Soomaali umad ay leedahay dowlad dhisatay hana qaad iyo horumar uma diidayo caqliga wanaagsan" ayuu yiri waa sida uu hadalka u dhigaye.
"Asalkaba haddii ay laba dowladood isku biireen, laba shirkadood ama laba kooxood isku biiraan oo la isafgaran waayo lama kala go'ine wey kala ambababxeen , wey kala noqdeen, oo wey kala gurteen" ayuu yiri uddoomiye ku xigeenka Golaha Wakiillada Somaliland Axmedyaasiin Sheekh Cali Ayaanle oo BBC u warramay.
Wasiir Axmed Ciise Cawad
Wasiirka Arrimaha Dibadda ee Soomaaliya Amb Axmed Ciise Cawad oo isna BBC u warramay wuxuu yiri: "Somaliland ma aha dal madax bannaan oo ka madax bannaan Soomaaliya oo gooni u taagan adduunka meel u aqoonsan ma jirto saas, sharciyada adduunka oo dhan iyo go'aammada adduunka oo dhan UN. AU, Dalalka Islaamka, Carabta iyo Igad kulligood waxay qiraan Soomaaliya iney tahay hal dal iyo hal dal oo mid ah marka adduunku saasuu qabaa saaseyna tahay."
"Adduunkana waa insey sidaas dalalka qaarkood ay ixtiraamaan weeye go'aammada adduunka ee ay qaybta ka yihiin, wixi khilaaf jira Soomaalida iyo iyaga dhexdooda iney ka wada hadlaan weeye, xukumadda Soomaaliyana sida xukumadihi hore diyaar ayey u tahay walaalahood Soomaliland la hadasho, la fariisato, la heshiiso, la isfahmo laakiin dalkaleeto inuu noo carqaladeeyo dhib noo abuuro kama yeeleyno waxaanna u sheegay inaan Ginea ka yeeleyn" ayuu yiri wasiir Cawad.
"Waxaan u sheegnay iney jiraan khatar iyo olole khatar gelin karo midnimada Soomaaliya oo socda waxaan u sheegnay in ololahaasi socdo ay ka mid yihiin dalal la yaqaanno sidaa daraaddeed waxaan codsannay in ay adduunka naga kaalmeeyaan iyo iney u sheegaan dalalka adduunka iney ka daayaan dhibka." ayuu yiri wasiir cawad oo ka warramayey waxa ay kala hadleen wakiillada dalalka caalamka u fadhiya Soomaaliya.
"Waxaan sida oo kale arkayey niman wasiiro sheeganaya ama khubaro sheeganayey oo iyaguna dhahayey, waxaan idiin sheegayaa xiriirka diblomaasiyadeed kuma xirna ma aha safaaradaha keli ah safaaraduhu waa qayb ka mid ah, dalalka waxay xiriir diblomaasi iyo meela ayey isugu yimaaddaan waa la kulmaa."
Madaxweynaha Somaliland, Muse Biixi ayaa si heer sare ah loogu soo dhaweeyay Jamhuuriyadda Guinea
Hadalla kulkulul ee ay isdhaafsanayaan Soomaaliya iyo Somaliland ayaa yimid marki uu Madaxweynaha Jamhuuriyadda gooni iisu taaggeeda ku dhawaaqday ee Somaliland, Muse Biixi Cabdi uu booqasha rasmi ah uu ku tagay dalka Guinea, halkaas oo si aan caadi ahayn loogu soo dhaweeyay.
Haddaba, tan iyo markii ay sidaasi sheegtay xukuumadda Soomaaliya ayay BBC-du la xidhiidhay Wasiirka Arrimaha Dibadda ee Somaliland Yaasiin Maxamuud Faratoon oo ka tirsan wefdiga Madaxweyne Biixi ee booqashada ku jooga Guinea, waxaana uu kaga jawaabay hadalka Xukuumadda Federaalka Soomaaliya: "waxaa na soo gaadhay in maamulka xamar sida ay yidhaahdeen ay calaaqaad u gooyeen dalka la yidhaahdo Guinea, oo ay ka xun yihiin booqashadayada, arrintaa waxaannu u aragnaa inay maangaabnimo iyo aragti la'aani ku dheehan tahay."
"Aad mooddidna in ay ku qanacsan yihiin in Somaliland ay u xidhan tahay, nasiib darro se malaa ma oga in Somaliland cilaaqaad la leedahay dalal badan oo caalamka ah oo Afrika ah, Bariga Dhexe iyo Yurub ka jira oo marar hore nagu soo dhaweeyey habmaamuuska qaran looga baahan yahay."
Haddaba Cabdinaasir Ibraahim Saacadaale, agaasimaha machadka cilmi-baarista ee HPPSOR, ayaa hadallada ay laba dhinac is dhaafsadeen ku tilmaamay "iney arrintu soo adkaaneyso oo lagu soo dhawaanayo uu hadda gaadhay meelo, marki hore waxay iska ahayd un in laga wada hadlayey waxyaala guud laakiin hadda waxaad moodda iney arrintu ku soo dhawaatay melihi ugu adkaa taas ayaana keeneysa in dibloomaasiyad badan la isticmaalo."
"Marka waxa muuqda waxaa weeye Soomaaliya waxay arkeysaa habeen soo socda oo waxay arkeysaa keeskeedi ku dhisnaa ee ahaa iney go'doomiso Somaliland oo ay ku sheegtay gooni u goosad inuu burayo, Somaliland waxay iyaduna adduunka u tusineysaa dhinac marka laga eego Soomaaliya iney wadahadalba oggoleenoo arrinteeda ay tahay gola kaga kac." ayuu yiri Cabdinaasir Ibraahim Saacadaale oo BBC u warramay.
TOOS Maxaa keenay in ninkan Soomaaliga ah uu ku noolaado waddooyinka Faransiiska?